”Annaga ayaa ilaalinayna!” – Turkiga oo Maraykanka ku helay fursad istaraatiji ah oo ”mar soo bax ah” | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Annaga ayaa ilaalinayna!” – Turkiga oo Maraykanka ku helay fursad istaraatiji ah...
”Annaga ayaa ilaalinayna!” – Turkiga oo Maraykanka ku helay fursad istaraatiji ah oo ”mar soo bax ah”
(Ankara) 09 Juun 2021 – Ankara ayaa soo jeedisey inay iyadu maamusho isla markaana ilaaliso gegada caalamiga ah ee Kabul ee Hamid Karzai International Airport kaddib marka ay halkaa ka wada baxaan Maraykanka iyo ciidamada kale ee NATO, sida ay Reuters u sheegeen saraakiisha Turkigu.
Ankara ayaa yaboohan ka samaysay kulankii NATO ee bishii hore ee Maajo kaddib markii ay Maraykanka iyo xubnaha kale ee NATO ay isku raaceen inay halkaa ka baxaan 11-ka Sebtembar kaddib 20 sanadood oo ay la herdamayeen Daalibaan.
Waxaa haatan soconaya wadahadal u dhexeeya Turkiga, Maraykanka iyo xubnaha kale ee NATO si loo sameeyo xayndaab amaan oo ku saabsan meelaha muhimka ah kaddib marka ay ciidamadani ka baxaan Afghanistan.
Wasiirka Gaashaandhigga Turkiga, Hulusi Akar, ayaa sheegay in Ciidamada Turkigu ay sii joogayaan Hamid Karzai International Airport, haddii ay taageero ka helaan xulafada kale ee NATO, iyadoo ay saraakiil Maraykan ah oo is qarinaya ay sheegeen inuu Maraykanku u guuxey aragtida Turkiga, balse ay Turkigu “dalabaad badan hor dhigayaan” Maraykanka iyagoo fursaddan ka faa’iidaysanaya.
Si kastaba, arrintan ayaa lagu gorfayn doonaa kulanka madaxda NATO oo Afghanistan looga hadli doono Isniinta soo aaddan, halkaasoo uu MW President Recep Tayyip Erdoğan uu ku arki doono Joe Biden markii ugu horreeysey tan iyo markii uu xilka la wareegey 20-kii Jannaayo sanadkan.
Turkiga ayaa doonaya inuu arrintan u adeegsado samadoonnimo uu ku doonayo in lagu dhameeyo xurgufta kala dhaxaysa Maraykanka oo kasoo horjeestey iibsiga gantaalaha S-400, taasoo keentay inuu cunaqabateeyo wershadaha wax soo saarka agabka ciidan ee Turkiga.
Dayuurad Black Hawk ah oo ay NATO leedahay oo dul heehaabaysa caasimadda Kabul, Juun 29, 2020. Reuters
Previous articleRuushka oo ay ku ”cadaatay” inuu isagu soo ridey dayuurad rakaab ah oo uu lahaa dal Muslim ah
Next articleSiyaasi Somaliland usoo jeediyey hindise ay fiican tahay inay xitaa raacdo DF Somalia